1. Waa maxay? Marna looguma talo gelin inuu yimaado Imaanshaha muddo dheer kahor intaanad soo kaban Waxaa laga yaabaa in illaa heer laga xanaaqo, la xanaaqo, aan waxba qaban karin. Dad badan ayaa laga yaabaa inay soo mareen dhibaatada qallafsanaanta. Taasi mararka qaar waxay timaadaa waqtiyo aysan aheyn inay lamid noqoto Kulan ahaansho Ama ka wada hadalka dhacdooyinka muhiimka ah Ama waxay ku jirtaa dhacdo in Kaiwa dhalan doonto Markaad ka fikirto, waa wax laga xumaado, qalbigaaga oo xanaaqsan. Laakiin ha ka baqin Maanta waxaan ogaanay sida looga takhaluso qaniinyada. Taasi waxaan u soo uruuriney inaan kuu sheegno inaad iska ilaaliso welwelka Markay calaamaddani soo noqoto
2. Baro sababaha hakinka kahor intaadan ogaanin sida looga takhaluso nacaskaaga. Sabab waa inuu jiraa. Qof kasta oo sameeya waxa suurta gal ah inuu daryeelo oo kahortago astaamahan dhibka badan Hiccup waa xaalad foosha si lama filaan ah ugu dhaca muruqa diaphragm oo kuyaala inta udhaxeysa laabta xabadka iyo caloosha. Foosha awgeed Natiijada neefsashada degdegga ah Laakiin isla mar ahaantaana, hawada soo gelaysa waxaa ku xayiran xadhkaha codka oo si lama filaan ah u xidha. Laga soo bilaabo foosha muruqyada hunguriga Keenida sanqadh yar oo naga xanaajisa Waxay dhici kartaa muddo-gaaban ka dibna waa la waayi karaa, ama mararka qaarkood waxay socon kartaa in ka badan 48 saacadood. Cabbitaan xad dhaaf ah Cun cuntada si dhakhso ah u cun, ha u cunin si fiican ama ha cunin basbaas, hawo kulul. Waxa kale oo sababi kara xaalad kacsan ama isbeddel deg-deg ah oo heerkulka ah oo jidhka u keenaya inuu si kedis ah u hagaajiyo.
3. 5 siyaabood oo looga takhaluso qaniinyada Oo aanu saamayn ku yeelan jidhka Loogu talagalay qof kasta oo khafiifa inta badan Maanta waxaan helnay hab nabdoon oo sahlan. Ka sii muhiimsan, ma saameynayso jirka inuu midba midka kale ka tago.
4. Kabbasho biyo aad u qabow ama ku luqluqo biyo qabow. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax badan ku neefsatid adoo cabaya koob weyn oo biyo qabow, biyuhuna sidoo kale waxay kaa caawin doonaan muruqyada xiraya neefsashadaada inay furmaan oo ay nastaan, laakiin si tartiib ah u cab oo neefta u hay kadib markaad nasato. Habeen dambe si aad uga fogaato ceejinta.
5. Neeftaada hayso muddo kooban adoo tirinaya ilaa toban si tartiib ah.Tani waxay la mid tahay habka koowaad. Neefta ka dib Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si buuxda u neefsanno. Waxay kaa caawin kartaa yareynta astaamaha habeen dambe.
6. Cun cunnooyin badan oo dhanaan, macaan sida liin dhanaanta ama sonkorta sonkorta ah. Laga soo bilaabo dhadhanka cuntada Adigoon wax dhibaato ah geysan
7. Martiqaad saaxiib si aad uqaxdo Markay naxdin dhacdo, jidhku wuxuu qaadayaa neef deg deg ah. Muruqyaduna waxay ka kala baxaan bilowga degdegga ah
8. Neefsashada ama keenista astaamaha hindhisada Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan si qoto dheer u neefsanno oo hindhisadu waxay ka caawineysaa muruqyada kala-goysyada iyo dabaysha in la sameeyo.
9. Haddii talaabooyinka aan kor ku soo xusnay aan wali lumin Oo sii socoshada sii socoshada in ka badan 48 saacadood, waa inay u tagto dhakhtar daawo iyo daaweyn si loo helo sababta Sidaan soo sheegay, astaamo kasta waxay leeyihiin asal ahaan. Markaan xannibno muddo dheer, sida jirka, waxay noo soo dirtaa xoogaa calaamado digniin ah oo aan hubinno inaan hubinno inaan ku jirno dhinaca nabdoon.